चर्चित बलिउड अभिनेत्री एश्वर्या चलाउँदिनन् फेसबुक/ट्वीटर किन ? कारण यसताे पाे रहेछ ! - Purbeli News
चर्चित बलिउड अभिनेत्री एश्वर्या चलाउँदिनन् फेसबुक/ट्वीटर किन ? कारण यसताे पाे रहेछ !
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १५, २०७३ समय: १३:२५:२७
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री एेश्वर्य राय बच्चन खासै सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन्नन् । आजको सामाजिक सञ्जालको दुनियामा किन उनी यसबाट टाढा रहेकी छन् त ? यसको कारण भनेको उनका पति अभिशेक हुन ।भारतीय समाचारमाध्यले उल्लेख गेरअनुसार उनी सामाजिक संजालमा आउन चाहे पनि सकेकी छैनन् ।
उनलाई पति अभिषेक बच्चनले रोकेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यता, अभिषेक भने सामाजिक संजालमा छन् र प्रायः पोस्ट पनि गरिरहेका हुन्छन् । ऐश्वर्यले सामाजिक संजालको दबाब झेल्न नसक्ने भएकाले उनी यसमा सक्रिय नरहून् भन्ने रहेको अभिषेकको भनाइ छ ।